sdfgsdfg: ဘိန်း​ဘုရင် ခွန်ဆာ
အ​ေမရိကန် အပါအဝင် ကမ္ဘာက ဖမ်း​ဆီး​ ရမိ လို​ေနတဲ့​ ဘိန်း​ဘုရင်​ေဟာင်း​ ခွန်ဆာ အသက် ၇၄ နှစ် အရွယ်မှာ ​ေသဆံုး​ သွား​ြပီလို့​ ​ေအပီ သတင်း​မှာ ​ေဖာ်ြပပါတယ်။ ခွန်ဆာဟာ ရန်ကုန်မှာ အခုလ ၂၆ ရက်မှာ ကွယ်လွန် သွား​တယ်လို့​ ခွန်ဆာရဲ့​ ​ေဆွမျိုး​ေတွထံက သိရ​ေြကာင်း​ ကိုယ်​ေရး​ အရာရှိ​ေဟာင်း​ ခွန်ဆိုင်း​ ဂျိုင်ယင်း​က ​ေြပာပါတယ်။
ခွန််ဆာဟာ ဆီး​ချို၊​ ​ေသွး​တိုး​နဲ့​ ​ေလြဖန်း​ ​ေရာဂါတို့​ကို ခံစား​ေနရတာ ကာလ ြကာြမင့်​ြပီ ြဖစ်ပါတယ်။ အမည် မ​ေဖာ်လိုသူ ြမန်မာ အစိုး​ရ အရာရှိ တဦး​က​ေတာ့​ ခွန်ဆာ ​ေသဆံုး​တာကို အတည်ြပုြပီး​ ​ေသဆံုး​ရက်ဟာ ​ေအာက်တိုဘာ ၂၈ ရက်လို့​ ​ေြပာပါတယ်။
ခွန်ဆာမှာ ကျန်ရစ်သူ သား​ သမီး​ ၈ ဦး​ ရှိြပီး​၊​ သား​ ၅ ​ေယာက်၊​ သမီး​ ၃ ​ေယာက် ြဖစ်ပါတယ်။ ခွန်ဆာရဲ့​ ဇနီး​ ြဖစ်သူက​ေတာ့​ ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှာ ဆံုး​ပါး​ခဲ့​ြပီး​ ြဖစ်ပါတယ်။ ခွန်ဆာဟာ ြမန်မာ စစ်အစိုး​ရထံ လက်နက်ချြပီး​ ​ေနာက်ပိုင်း​ စီး​ပွား​ေရး​ လုပ်ကိုင် ​ေဆာင်ရွက်နိုင်ြခင်း​ မရှိ​ေတာ့​ေပမဲ့​ ရှမ်း​ြပည်နယ်ထဲက ဟိုမိန်း​၊​ နမ့်​စံ၊​ လာရှိုး​ ဘက်​ေတွမှာ စီး​ပွား​ေရး​ လုပ်​ေနတဲ့​ ခွန်ဆာရဲ့​ ဩဇာခံ တပည့်​ေတွက ​ေထာက်ပွံ့​ေြကး​ေမွး​ ခဲ့​တာလို့​ ရှမ်း​ သတင်း​စဉ် အယ်ဒီတာချုပ် ဦး​ခွန်စိုင်း​က အာရ်အက်ဖ်​ေအကို ​ေြပာပါတယ်။
နာမည်ဆိုး​နဲ့​ ​ေကျာ်ြကား​တဲ့​ ဘိန်း​ဘုရင် ခွန်ဆာဟာ ြမန်မာ - ထိုင်း​ - ​ေလာ သံုး​နိုင်ငံ နယ်စပ် ​ေရွှြတိဂံ ​ေဒသမှာ အ​ေြခစိုက်ခဲ့​ြပီး​ ဘိန်း​ေမှာင်ခို ထုတ်လုပ်​ေရး​ အများ​ဆံုး​ လုပ်​ေဆာင်ခဲ့​တဲ့​ ထိပ်တန်း​ မူး​ယစ်​ေဆး​ ရာဇာ ြဖစ်ခဲ့​ပါတယ်။ ခွန်ဆာဟာ အဲဒီ ​ေဒသမှာ ြဂိုဟ်တု ဆက်သွယ်​ေရး​ ရုပ်ြမင် သံြကား​၊​ ​ေြမြပင်မှ ​ေဝဟင်ပစ် ဒုန်း​ကျည်​ေတွ၊​ စာသင်​ေကျာင်း​ စတာ​ေတွ အထိ တပ်ဆင် နိုင်ခဲ့​ပါတယ်။
၁၉၉၆ ဇန်နဝါရီမှာ ြမန်မာ စစ်အစိုး​ရထံ လက်နက် ချပါတယ်။ ြမန်မာ စစ်အစိုး​ရရဲ့​ အသံုး​အနှုန်း​ အရ ဦး​ခွန်ဆာက လက်နက်နဲ့​ ြငိမ်း​ချမ်း​ေရး​ လဲလှယ်ပါတယ်။ ခွန်ဆာကို လွှဲ​ေြပာင်း​ေပး​ဖို့​ အ​ေမရိကန်က ​ေတာင်း​ဆို​ေပမဲ့​ ြမန်မာ စစ်အစိုး​ရက လွှဲမ​ေပး​ ပါဘူး​။
ဦး​ခွန်ဆာဟာ ဩဂုတ်လ ကုန်ပိုင်း​က မဂင်္လာဒံု စစ်​ေဆး​ရံုမှာ တပတ်​ေလာက် ​ေဆး​ကုသ ခံခဲ့​ြပီး​ သက်သာလာတဲ့​ အချိန်မှာ ​ေနအိမ်ကို ြပန်ခွင့်​ မရဘဲ စစ်​ေထာက်လှမ်း​ေရး​က ​ေရြကည်အိုင်မှာ အကျယ်ချုပ်နဲ့​ ထိန်း​သိမ်း​ ခံထား​ရတုန်း​ ကွယ်လွန်သွား​တာ ြဖစ်တယ်လို့​ ရှမ်း​သံ​ေတာ်ဆင့်​ သတင်း​ ဌာနက ထုတ်ြပန်တဲ့​ သတင်း​မှာ ​ေဖာ်ြပ ထား​ပါတယ်။
ရှမ်း​ြပည် တပ်မ​ေတာ် ​ေတာင်ပိုင်း​ရဲ့​ ​ေြပာ​ေရး​ ဆိုခွင့်​ရှိသူ ဗိုလ်မှူး​ စိုင်း​ေလာင်ဆိုင်ဝ် က​ေတာ့​ ဘိန်း​ဘုရင် ခွန်ဆာဟာ နာမည်ဆိုး​နဲ့​ ​ေကျာ်ြကား​ ခဲ့​ေပမဲ့​ ရှမ်း​ ြပည်သူ​ေတွအတွက် စွမ်း​ေဆာင် ခဲ့​တာ​ေတွ ရှိတယ်လို့​ အခုလို ​ေြပာြပ ပါတယ်။
"သူ ဦး​ေဆာင်ခဲ့​တဲ့​ ​ေခတ်မှာ ဆိုရင် တဖက်တလမ်း​က နာမည်ဆိုး​ေတွ ရခဲ့​သလို တဖက်တလမ်း​ ကလည်း​ ရှမ်း​ြပည် တပ်မ​ေတာ် အတွက် သူ့​ရဲ့​ ​ေကာင်း​တဲ့​ စွမ်း​ေဆာင်ချက်​ေတွ၊​ ပျိုး​ေထာင် ​ေပး​တဲ့​ သာဓက​ေတွ ရှိခဲ့​ ပါတယ်။ ဥပမာ - ကျ​ေနာ်တို့​ ရှမ်း​လူငယ်​ေတွကို စစ်ပညာ သင်​ေပး​တာတို့​၊​ ကိုယ့်​ အမျိုး​ကို ချစ်တတ်​ေအာင်၊​ ကိုယ့်​ တိုင်း​ြပည်ကို ချစ်တတ်​ေအာင်၊​ ရန်သူနဲ့​ မိတ်​ေဆွ ခွဲြခား​ တတ်​ေအာင် အဲဒါ ​ေတွကို သူက စြပီး​ ပျိုး​ေထာင် သင်ြကား​ ​ေပး​တာ​ေတွလည်း​ ရှိပါတယ်။"
ခွန်ဆာ ကိုယ်​ေရး​ အကျဉ်း​
အြခား​အမည် - Tun Hsa
တရုတ် နာမည် - ချန်ရှီဖူ သို့​မဟုတ် ကျန်ကွီဖူ။
ြမန်မာအမည် - ဦး​ထက်​ေအာင်။
​ေမွး​သက္ကရာဇ် - ၁၉၄၃ ခုနှစ်၊​ ​ေဖ​ေဖာ်ဝါရီလ ၁၇ ရက် စ​ေန​ေန့​။
​ေမွး​ဖွား​ရာ ​ေနရာ - Hpa Hpeung village, လိုက်​ေမာ်ရပ် (Loimaw Ward), တန်း​ယန်း​ ြမို့​နယ် (Tangyan township know as formerly Mongyai state), လာရှိုး​ ခရိုင်၊​ ရှမ်း​ြပည်​ေြမာက်ပိုင်း​။
တရုတ် ဖခင် Khun Ai (Zhang Bingyao) နဲ့​ ရှမ်း​မိခင် Nang Hseng Zoom တို့​က ​ေမွး​ဖွား​။
အိမ်​ေထာင်ဖက် ဇနီး​ အမည် - Nang Kayyun (died 1993)
သား​ သမီး​များ​ - Nang Long (Khajit), Zarm Merng (Phajon), Zarm Herng (Phathai), Nang Kang (Khanittha), Zarm Zeun (Phairote), Zarm Myat (Phaisarn), Nang Lek (n.a.), Zarm Mya (Pitak).
ငယ်စဉ်က ကူမင်တန် တရုတ်ြဖူတပ်မှာ အမှုထမ်း​ခဲ့​။ ​ေနာက်ပိုင်း​တွင် ကူမင်တန်မှ ခွဲထွက်ြပီး​ ​ေနာက်လိုက် ရာဂဏန်း​ အနည်း​ငယ်ြဖင့်​ ကိုယ်ပိုင်တပ် ​ေထာင်။
၁၉၆၃ - ြမန်မာ အစိုး​ရ ဩဇာခံ လွယ်​ေမာ် ကာကွယ်​ေရး​တပ် အြဖစ် ​ေြပာင်း​လဲ။ ​ေငွ၊​ ဝတ်စံုနဲ့​ လက်နက်​ေတွ ရယူြပီး​ ရှမ်း​လူမျိုး​စု တပ်​ေတွကို တိုက်ခိုက်။ တပ်အင်အား​ ၈၀၀ အထိ တိုး​ချဲ့​နိုင်တဲ့​ အခါ ြမန်မာ အစိုး​ရနဲ့​ အဆက်အသွယ် ြဖတ်ြပီး​ ရှမ်း​နဲ့​ ဝ နယ်​ေြမ အတွင်း​ နယ်ပယ် ချဲ့​ထွင်ြပီး​ ဘိန်း​ထုတ်လုပ်မှု တိုး​ြမှင့်​။
၁၉၆၇ - ရှမ်း​ြပည်နယ် အတွင်း​ ကူမင်တန် ြအွကင်း​အကျန် တပ်​ေတွနဲ့​ မသင့်​မြမတ် ြဖစ်ြပီး​ အင်အား​ ဩဇာ ကျဆင်း​။
၁၉၆၉ - ြမန်မာ အစိုး​ရက ဖမ်း​ဆီး​။ ခွန်ဆာရဲ့​ လက်​ေထာက် တပ်မှူး​က ဖမ်း​ဆီး​ သွား​တဲ့​ ရုရှ ဆရာဝန် ၂ ဦး​နဲ့​ လဲလှယ်ရန် ​ေတာင်း​ဆိုခဲ့​လို့​ ၁၉၇၃ မှာ ြပန်လည် လွတ်​ေြမာက် လာခဲ့​။
၁၉၇၆ - ဘိန်း​ြဖူ​ေမှာင်ခို လုပ်ငန်း​မှာ အ​ေြခြပန်ကျသွား​ြပီး​ ထိုင်း​နိုင်ငံ​ေြမာက်ပိုင်း​ ဘန်ဟင်း​တခ်တွင် အ​ေြခစိုက်။ ဘိန်း​လုပ်ငန်း​ ြပန်လုပ်ခဲ့​သလို သူ့​တပ်ဖွဲ့​ကိုလည်း​ စည်း​လံုး​ ညီညွတ်တဲ့​ ရှမ်း​ တပ်မ​ေတာ် (Shan United Army) လို့​ ​ေြပာင်း​လဲြပီး​ ရှမ်း​ လူမျိုး​များ​ဘက်မှ ရပ်တည်ကာ ြမန်မာ စစ်အစိုး​ရကို တိုက်ခိုက်။
၁၉၈၅ - စဝ်ကွဏ်း​ဆင် ​ေခါ် မိုး​ဟိန်း​ရဲ့​ ရှမ်း​ေတာ်လှန်​ေရး​ ​ေကာင်စီနဲ့​ ပူး​ေပါင်း​ြပီး​ ရှမ်း​ြပည် အ​ေရှ့​ပိုင်း​က​ေန ရှမ်း​ - ကယား​ နယ်စပ် အထိ ထိန်း​ချုပ် လာနိုင် ခဲ့​။ အဲဒီ​ေနာက် အမ်တီ​ေအ ​ေခါ် ​ေမာ်ထိုင်း​ (Mong Tai) တပ်မ​ေတာ်ကို ဖွဲ့​စည်း​ခဲ့​ြပီး​ ​ေရွှြတိဂံလို့​ အမည်တွင်တဲ့​ ထိုင်း​ - ြမန်မာ - ​ေလာ နယ်စပ်မှာ ဘိန်း​ြဖူ အ​ေြမာက်အြမား​ ထုတ်လုပ် ခဲ့​တာ​ေြကာင့်​ ဘိန်း​ဘုရင် ခွန်ဆာလို့​ ထင်ရှား​ လာခဲ့​။
၁၉၈၉ - အ​ေမရိကန် ြပည်​ေထာင်စု နယူး​ေယာက် တရား​ရံုး​က ခွန်ဆာကို ဘိန်း​ တန်တ​ေထာင် တင်ပို့​ရန် ြကံစည်မှုြဖင့်​ တရား​စွဲ။ သူ ထုတ်လုပ်တဲ့​ ဘိန်း​ြဖူ အား​လံုး​ကို ဝယ်လျှင် နိုင်ငံတကာ မူး​ယစ်​ေဆး​ ​ေဈး​ကွက်သို့​ မ​ေရာင်း​ေတာ့​ပါဟု အ​ေမရိကန်ကို ကမ်း​လှမ်း​။
၁၉၉၆ ဇန်နဝါရီ - ြမန်မာ စစ်အစိုး​ရထံ လက်နက်ချ။ ြမန်မာ စစ်အစိုး​ရ၏ရဲ့​ အသံုး​အနှုန်း​ အရ လက်နက်နဲ့​ ြငိမ်း​ချမ်း​ေရး​ လဲလှယ်။ (မူး​ယစ်​ေဆး​ ​ေမှာင်ခိုမှုြဖင့်​ အ​ေမရိကန်တွင် တရား​ မဆိုင်လိုလို့​ လက်နက် ချတယ်လို့​ ဆိုြက။)
ခွန်ဆာကို မိလျှင် ​ေဒါ်လာ (၂) သန်း​ ချီး​ြမှင့်​မယ်လို့​ အ​ေမရိကန်က ​ေြကညာ။ သူ့​ကို ဖမ်း​ဆီး​ ​ေပး​ပို့​ေရး​ကို ြမန်မာ စစ်အစိုး​ရက ြငင်း​ဆို။
ရှမ်း​ြပည်နယ်မှ ရန်ကုန် ြမို့​ေတာ်သို့​ သွား​ေရာက် အ​ေြခချ။ ရန်ကုန်၊​ မန္တ​ေလး​နှင့်​ ​ေတာင်ြကီး​တို့​တွင် လုပ်ငန်း​ေပါင်း​များ​စွာ ရင်း​နှီး​ လုပ်ကိုင်။
​ေသဆံုး​ြပီဟု ​ေအာက်တိုဘာ ၃၀ ရက်တွင် သတင်း​ ထွက်​ေပါ်။
၁။ ကွယ်လွန်သူ ဘိန်း​ဘုရင် ခွန်ဆာ အ​ေြကာင်း​ တ​ေစ့​တ​ေစာင်း​ (ဦး​မိုး​ေဇာ်) ၊​ ဗွီအို​ေအ - အ​ေမရိကန် အသံ၊​ ြမန်မာပိုင်း​ အစီအစဉ် ကွန်ရက် စာမျက်နှာ။
၂။နာမည်​ေကျာ်ဘိန်း​ဘုရင်ခွန်ဆာ ကွယ်လွန်၊​ အာရ်အက်ဖ်​ေအ - လွတ်လပ်​ေသာ အာရှ အသံ၊​ ြမန်မာပိုင်း​ အစီအစဉ် ကွန်ရက် စာမျက်နှာ။
၃။ ဘိန်း​ဘုရင်​ေဟာင်း​ ခွန်ဆာ ရန်ကုန်မှာ ​ေသြပီ ၊​ ဒီဗွီဘီ - ဒီမိုကရက်တစ် ြမန်မာ့​ အသံ သတင်း​ ကွန်ရက် စာမျက်နှာ။
၄။ Khun Sa: As told to SHAN , Shan Herald Agency for News (S.H.A.N.).
Posted by သစၥာ | သ​စ္စာ at 3:50 AM
Labels: တက်​ေခတ်နတ်ဆိုး​များ​, ဘိန်း​ဘုရင် ခွန်ဆာ